အထွေထွေ – Page2– My Doctor
ဖြစ်လာနိုင်သော မျှော်လင့်ချက် ပျော်ရွှင်မှု
DrMay ThantSyn	2019-06-05T09:31:35+00:00	June 5th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
အဆီကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင် လူတိုင်း လိုလို ထီပေါက်ဖို့ သူဌေးဖြစ်ဖို့ စသည်ဖြင့် စိတ်ထဲတွေးကာကြည်နူးကြပါတယ် ထီပေါက်ဖို့က မသေချာပါဘူး ကျန်းမာဖို့က အေထာက်အကျူပုစေသော အစားအစာများ ဆေးဝါးမ်ား မွီဝဲ စားသုံးပေးလို့ရပါတယ် ဒါကသေချာပါတယ် လောဆည် ပြောခြင်တာ ကတော့ အကျိုးများလှတဲ့ ငါးကြီးဆီအကြောင်းလေးပါ ငါးကြီးဆီကို လူတိုင်း စားဖူးကြပါတယ် ဒါပေမယ့် ငါးကြီးဆီရဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပုံ ကို တစ်တစ်ခွခွ သိသူနည်းလှပါတယ် ၁ ငါးကြီးဆီ နှင့် စိတ်ဖီးမှု ငါးကြီးဆီ ဟာ၃မျိုးရှိပါတယ် DHA,ALA and EPAပါ. အဲထဲက EPA ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျတာ စိတ်ဖိစီးတာတွေအတွက် ထိရောက်စွာ လျော့ချပေးပါတယ် ၂ မျက်စိအတွက်ဆေးတပါး ငါးကြီးဆီထဲပါတဲ့ DHAဟာ
DrMay ThantSyn	2019-06-14T19:16:21+00:00	June 5th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆေးထိုးမှ ဒူးနာပျောက်မှာလား အို စာရှုသူ သင် ဒူးနာဖူးပါသလား ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဒူးနာ တာရှားပေမယ့် သင် အသက် ၆၀ကျော်လါပါက အမျိုးသမီးဆို ၁၀၀မှာ၄၅ ယောက် အမျိုးသားဆို ၁၀၀မှာ၂၅က ကျိန်းသေနာ တတ်ပါတယ် အဘိုးအဘွားအရွယ် ဒူးနာနေပြီဆို အိပ် လို့လည်း မပျော် ထိုင်ရထရ မလွယ် ဒုက္ခများလှ သလို မိသားစုထဲလည်း ပြုစု ကူညီဖို့ တာဝန်ကြီးကြပါတယ် ဒူးနာတဲ့ ဒဏ်မခံစား နိုင်လို့ ဆေးစွဲသောက် လိုက် ဆေးထိုးလိုက်ဖြစ် နေတဲ့ အဘိုးဘွားတွေ အတွက် ဝေဒနာဟာ ကြာလာတော့ ဖင်လည်း နာ ဒူးလည်း နာ အစာအိမ်လည်းနာ နာ၃နာနဲ ပတ်ချာရမ်းနေတော့တာပါပဲ မိသားစုအနေနှင့်ကလည်း
Fungal infection between thighs
DrMay ThantSyn	2019-06-04T14:52:55+00:00	June 4th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
" ပေါင်ကြားမှာ စွဲတဲ့မှို " ကြီးကြီးမားမားရောဂါမဟုတ်ပေမယ့် အင်မတန်မှဒုက္ခရောက်ရတဲ့ပြသနာကတော့ ပေါင်ခြံပေါင်ကြားထဲမှိုစွဲပြီး ယားယံတဲ့ပြသနာပါ။ယားကလည်းအလွန်ယား.... လူကြားသူကြားထဲ ကုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်တဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နေရာကြီး..မကုတ်တော့လည်း ယားပြီးရင်းယား...အဲ့မှာစတွေ့တာပါပဲ။ အိမ်ရောက်လို့ အားရပါးရကုတ်တော့မယ်လို့ကြည့်လိုက်ရင် အရေပြားတစ်ဝိုက်ဟာ နီရဲနေမယ်၊အဖတ်အဖတ်တွေကွာနေမယ်၊ပက်ကြားအက်နေမယ်၊တောက်လျှောက်ယားနေ...ကုတ်လေယားလေဖြစ်နေမယ်၊စပ်ဖျင်းဖျင်းခံစားရမယ်။ ဒီလိုမှိုစွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့...မှိုတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်း စိုထိုင်းမှုကိုကြိုက်တယ်။ပုံမှန်လူတွေရဲ့အရေပြားမှာလည်း သာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မှိုတွေ သဘာဝအလျောက်ရှိနေတတ်တယ်။ယားလားဆိုတော့ မယား၊လူကိုဒုက္ခမပေးဘူး။ဒါပေမယ့် အပေါ်ကပြောခဲ့သလို လူတစ်ယောက်မှာ စိုထိုင်းစများလာပြီဆိုရင် မှိုတွေကပုံမှန်ဓာတ်ပိုပွားလာပြီး ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေပါပြီ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး စိုထိုင်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေမလဲဖြစ်တဲ့အခါ၊ မစိုမခြောက်အဝတ်အစားတွေဝတ်တဲ့အခါ၊ရေချိုးပြီး ရေစင်အောင်မသုတ်တဲ့အခါ၊အဝလွန်သူတွေမှာ အရေပြားအတွန့်အခေါက်များလို့ ချွေးအောင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ စိုထိုင်းမှုတွေများလာပြီး မှိုတွေပေါက်ပွားဖို့ အားပေးသလိုဖြစ်လာပါတယ်။ မကုဘဲထားမယ်ဆိုရင် ပေါင်ခြံပေါင်ကြားမှတစ်ဆင့် ဝမ်းဗိုက်၊တင်ပါးများဆီသို့ ပျံ့နှံ့ယားယံနိုင်ပါတယ်။ကုသဖို့ကလည်း မခက်ပါဘူး။ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ မှိုသတ်ဆေးလိမ်းဆေးခရင်မ်/အမှုန့် တစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်၊တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး အလေးပေးမယ်၊ရေပုံမှန်ချိုးမယ်၊ရေချိုးတဲ့အခါတိုင်း ဆပ်ပြာသေချာတိုက်မယ်...ကြိုကြိုကြားကြားတွေပါမကျန်တိုက်မယ်၊ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံး ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွေပါရေခြောက်အောင်သုတ်မယ်၊အဝတ်အစားသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ဝတ်မယ်၊အရမ်းကျပ်ထုပ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေအစား လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့
Omron HEM- 6232T
DrMay ThantSyn	2019-06-15T18:30:56+00:00	June 3rd, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
🔖ရုံးမှာ မရှိမဖြစ်လိုမဲ့ Omron HEM- 6232T🔖 ရုံးအလုပ်ဆိုတာ အမြင်အားဖြင့်တော့ အတော်လေးသက်သာသလို ထင်ရတယ်။ အရိပ်အောက်မှာ ရုံးတက်ရတာ ဘာပင်ပန်းလို့လဲပေါ့။ လူပင်ပန်းမှုမရှိလှပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးပင်ပန်းမှုတွေကတော့ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ။ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ယာဉ်ကြော ကြပ်ကြပ်ကို ကားကြပ်ကြပ်ထဲကနေ "ဒီနေ့လည်း နောက်ကျပြန်ပြီ"တွေးရင်း စခဲ့တဲ့ ရုံးဖွင့်ရက်မနက်ခင်း စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဟာ ညနေရုံးဆင်းချိန်အထိ အကြောင်းအရာပြောင်းသွားပေမဲ့ စိတ်တွေကတော့ ဆက်ဖိစီးနေရတုန်း။ ခေါင်းကိုက်စရာ စာရင်းဇယားတွေ.. Deadline နားကပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ...ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်တွေ.. အထက်လူကြီးရဲ့ ဖိအားတွေ.. လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ် စိတ်တိုင်းမကျမှုတွေ...စသည် စသည်ပေါ့.. လူတွေကွဲ အလုပ်တွေကွဲပေမဲ့ စိတ်ဖိစီးပင်ပန်းမှုတွေက အားလုံးမှာ တူတူရှိကြတယ်။ ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေရဲ့ နောက်မှာ သူ့ဘော်ဒါကြီး သွေးတိုးရောဂါလည်း တူတူပါလာတတ်တယ်။ သွေးတိုးရဲ့နောက်မှာတော့
DrMay ThantSyn	2019-06-03T09:59:11+00:00	June 3rd, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
🔖JPN 600 (သို့မဟုတ်) ဂျပန်ကလာတဲ့ သက်တော်စောင့်🔖 လူငယ်တွေအတွက် အသည်းကွဲတာက ရှောင်ဖို့မလွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုရင် လူကြီးတွေအတွက် ရှောင်ဖို့သိပ်မလွယ်တာ သွေးတိုးရောဂါပါပဲ။ 🎯သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ ?? သွေးပေါင်ချိန် 135/80 mmHg နဲ့ အထက်မှာအမြဲရှိနေရင် သွေးတိုးရောဂါရှိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နှလုံးရောဂါ..လေငန်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ စတဲ့ ကြောက်စရာ ပြဿနာတွေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တာမို့ သိပ်အန္တရာယ်များပါတယ်။ 🎯ဘာလို့ အိမ်မှာသွေးပေါင်ချိန်စက်ရှိသင့်တာလဲ ?? သွေးတိုးရောဂါတကယ်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အိမ်မှာတိုင်းတဲ့ Home Blood Pressure Monitoring က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ဆိုတာ အချိန်နဲ့ အမျှ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ 🔘Masked Hypertension ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။ အိမ်မှာသွေးပေါင်အမြဲတက်နေပေမဲ့
9 symptoms that indicate you are sufferring from Iron Deficiency
DrMay ThantSyn	2019-06-02T19:26:13+00:00	June 2nd, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
“ သင်သံဓာတ်ချို့တဲ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၉)ခု “ ၁။အကြောင်းမဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း အကြောင်းမဲ့လို့ဆိုရာမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လောက်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့အလုပ် လှုပ်ရှားမှုမျိုးမရှိပေမယ့် …. သိသိသာသာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေခြင်းမျိုးပါ။သံဓာတ်ချို့တဲ့သူ အယောက်၁၀၀ရှိရင် အယောက်၅၀ကျော်(ထက်ဝက်ကျော်)လောက်က ဒီလက္ခဏာကိုခံစားရပါတယ်။အားနည်းခြင်း၊စိတ်မကြည်ခြင်း၊အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း စတာတွေလည်း တွဲဖက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ၂။ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်ခြင်း အထူးသဖြင့် အောက်မျက်ခွံအတွင်းဖက်က သာမန်လူလို နီရဲမနေဘဲ ဖြူဖျော့နေနိုင်တယ်။မျက်နှာ၊သွားဖုံး၊ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ လက်သည်းတွေလည်း ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဒီလက္ခဏာဟာသာမန်သံဓာတ်ချို့တဲ့သူထက် သံဓာတ်သိသိသာသာ ချို့တဲ့သူများမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။ ၃။အသက်ရှူမ၀၊မောခြင်း လမ်းလျှောက်၊လှေကားတက် စတဲ့ သာမန်နိစ္စဓူဝလှုပ်ရှားမှူလေးတွေမှာတောင် အသက်ရှူမဝ၊မောနေမယ်ဆိုပါကလည်း သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကို သံသယဖြစ်ဖို့လိုနေပါပြီ။ ၄။ခေါင်းကိုက်၊ခေါင်းမူးခြင်း သံဓာတ်ချို့တဲ့တဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ကို အောက်စီဂျင်သယ်ပို့ပေးမယ့် သွေးနီဥတွေကောင်းစွာမဖြစ်ပေါ်နိုင် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရလဒ်အနေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ခေါင်းမူးခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ၅။ရင်တုန်ခြင်း အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲအလားတူပဲ …သံဓာတ်ချို့တဲ့မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်ရပ်အနေနဲ့